Mividy vaovao fa tsy plastika sy fonosana hafa
Mividiana akanjo ekolojika sy maharitra
Ara-tontolo iainana sy maharitra amin'ny fanadiovana sy fahadiovan'ny tena manokana
Fitaterana ekolojika sy maharitra
Samy te hanana tontolo honenana ny tsirairay. Miaraka amin'ny tontolo iainana mahasalama, loto kely, ranomasina madio ary rivotra madio. Mampalahelo fa maro ny olona mbola miaina tsy fahatsiarovan-tena ary mamela dian-tongotra ekolojika lehibe indraindray amin'ny Reny Tany.
Fiainana ekolojika sy maharitra amin'ny fiainana andavanandro
Miaina miaraka amin'ny natiora - © romannoru / Adobe Stock
Fa na ny dingana kely sy ny fanovana eo amin'ny fiainana andavanandro izay tena azontsika tsirairay atao aza dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fitehirizana ny planetantsika ary hiantohana fa hankafizintsika rehetra ny miaina azy io mandritra ny fotoana maharitra.
Vokatra isam-paritra ho an'ny famoahana emission vitsy kokoa
Afaka miova be ianao rehefa miantsena. Raha tokony hividy legioma sy voankazo avy any Nouvelle Zélande ianao dia afaka miverina amin'ny vokatra ara-potoana sy isam-paritra. Midika izany fa tsy misy ny famoahana solika azo sorohina. Ny teboka iray hafa dia ny fanohanana ireo tantsaha sy mpamatsy eo an-toerana.
Raha tokony hampiasa harona plastika dia azo atao anaty harona tsotra fotsiny ny voankazo sy legioma. Raha tsy azo sorohina ny kitapo dia azonao atao ny mitondra azy io amin'ny fotoana manaraka miantsena mba tsy hiteraka fako plastika betsaka kokoa noho ny ilaina.
Ny hena, trondro ary fromazy dia azo vidiana koa ao amin'ny fivarotana vokatra vaovao any amin'ny fivarotana lehibe sasany. Manome sakafo avo lenta ihany koa ireo mpivaro-kena, ozinina fromazy ary toeram-pivarotana tantsaha eny an-tsena sy toeram-pambolena. Io dia mamonjy fako be fonosana maro izay mipoitra rehefa mividy talantalana fampangatsiahana mahazatra.
Raha te hiantsena amin'ny fomba maharitra maharitra ianao dia afaka mampiasa sakafo biolojika na Demeter. Ity koa dia mandefa famantarana mazava manohitra ny fiompiana orinasa ary manome antoka fa karama ara-drariny ny tantsaha.
Azonao atao ihany koa ny mandray anjara betsaka amin'ny faharetana rehefa mividy akanjo. Mihabetsaka hatrany ireo magazay amin'ny tanana faharoa, tsena parasy ary fampiharana miaraka amina singa tsy mahazatra sy tsara tarehy. Raha aleonao manana akanjo vaovao, azonao antoka fa azo amidy ny fitaovana, misy kalitao organika ary ny akanjo dia tsy novokarina tamin'ny toe-javatra ratsy indrindra tamin'ny vidiny ambany indrindra. Akanjo tsara kokoa izay mitentina kely noho ny iray avy any Bangladesh, izay angamba ny ankizy aza no nanao azy.
Kitapo taratasy sy lamba
Soa ihany fa tsy mahazo kitapo plastika intsony ianao amin'ny kitapom-bola. Raha mbola manana kitapo ao an-trano ianao dia azonao atao ny mampiasa azy imbetsaka. Kitapo lamba izay maharitra ela, azo sasana ary ampiasaina hatrany hatrany hatrany no mety indrindra. Misy koa izao ny kitapo lamba misy endrika manintona na teny mampihomehy. Toa tsara kokoa noho ny harona plastika aza.
Ny fisarahana ny fako sy ny fiverenan'ny tavoahangy fitehirizana dia teboka roa lehibe ihany koa ho an'ny fiainana maharitra, izay indrisy fa matetika no tsy dia jerena.
Ho an'ny detergents, kosmetika ary vokatra fidiovana dia tsara ny mijery ny fonosana. Mihabetsaka ny mpanamboatra manolotra vokatra tsy misy mikroplastika, fitsapana biby, akora simika manimba na toy izany. Ny fampiasana fotsiny ny detérger fanasana lozika voajanahary sy tsy mampidi-doza ary ny fanasana lamba fanasan-damba dia fanamaivanana lehibe ho an'ny rano.
Karazan-tsiranoka nify sy vokatra fikarakarana maro no misy mikroplastika na plastika, izay voaporofo fa manimba be antsika olombelona sy ny tontolo iainantsika. Ny kosmetika voajanahary no safidy tsara kokoa ary mahaliana ihany koa ho an'ireo izay tia mandoko ny volon'izy ireo.
Ny silicones amin'ny shampoos mahazatra dia tsy enta-mavesatra lehibe ho an'ny rano sy ny natiora, fa azo antoka ihany koa fa tsy afaka mandray tsara ny loko ny volo. Ireo dia tsy hita ao anaty lahatsoratra fanatsarana tarehy sy fahadiovana voajanahary.
Torohevitra iray hafa: Ny volo dia azo miloko mahafinaritra miaraka amin'ny henna miloko volo. Izy io dia misy vovo-javamaniry 100 isan-jato ary tsy vitan'ny loko maro, fa tsy manimba ny fahasalamana sy ny tontolo iainana.
Rehefa mandro sy misasa ianao dia afaka manao fanasoavana lehibe amin'ny tany raha toa ka mampiasa rano kely. Rehefa manasa lovia dia fenoy rano ny vilany fa tsy mamela fotsiny ny paompy amin'ny fotoana rehetra dia mety amin'ny toetrandro sy ny poketrao. Toy izany koa, fandroana haingana fa tsy mandro feno tsy tapaka.
Mitaingina bisikileta hiasa, mandray tohatra fa tsy ascenseur, mampiasa fitateram-bahoaka fa tsy handeha irery amin'ny fiara lehibe - ireo sy ny fanovana kely maro hafa dia misy akony lehibe eo amin'ny tontolo iainantsika.
Satria raha ny olona rehetra izay tsy mila mandeha lavitra dia tonga any amin'ny nalehany handeha an-tongotra na bisikileta fa tsy handoto ny rivotra amin'ny setroka ho setroka, dia ho azo iainana kokoa ny planeta ary ho mahafinaritra sy ho vaovao kokoa ny rivotra.
Ny fampidirana fanatanjahan-tena bebe kokoa amin'ny fiainana andavanandro dia tsy tombony ho an'ny toetrantsika ihany. Indrindra amin'ny fotoana isan'ny miasa any amin'ny birao na asa hafa izay misy be dia be ny fipetrahana, ny vatana dia faly amin'ny hetsika fanampiny. Toe-javatra mandresy, sa tsy izany?
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. Jona 2021 15. Jolay 2021 Sokajy LifestyleKeywords Lifestyle, miaina maharitra, maharitra, tontolo iainana
indray Lahatsoratra taloha: Mamaky tantara an-tsary - tantara an-tsary ataon'ny ankizy
more Lahatsoratra manaraka: Bathtub | Fiainana sy fahasalamana